व्लग Archives | मेरो कलम
“सामान्यतया व्लग आफैले सिक्दै वनाईन्छ । साधारण भन्दा साधारण डिजाईन परिवर्तन गर्न नसक्दा अथवा नाममै चित्त नवुझ्दा अव यो व्लग नै नचलाउने भन्ने सोचले नयाँ मेल आईडीवाट पनी व्लग …
– व्लग बनाईसकेपछि कस्तो टेम्प्लेट राख्ने ? व्लगरले दिएकै टेम्प्लेट निकै साधारण हुन्छन् । राम्रो कन्टेन्ट लेखिसकेपछि डिजाईन पनी राम्रै हुनुपर्छ भन्ने सोचिरहनुभएको छ भने छानी छानी काईदाका टेम्प्लेटहरु …
यी हुन् ‘उत्कृष्ट अनलाईन विज्ञापनदाता कम्पनीहरु’ Best online advertising agency
Nepali April 22, 2013
– अनलाईन विज्ञापनको महत्व धेरै नै छ । अनलाईन विज्ञापन एजेन्सी मार्फत गरिएको प्रचार प्रसार छिनभरमै विश्व व्यापी भईरहेको हुन्छ । यसै कारणले पनी संकलिन विज्ञापनहरु Ads Agency ले …
~ विष्णु सुवेदी व्लग एउटा खुला पुस्तक हो । सामान्य अर्थमा तपाइ आफूले जानेका कुराहरू लेख्नुहुन्छ, काँटछाँट गरी मिलाउनुहुन्छ र त्यसलाई व्लगमा पोष्ट गर्नुहुन्छ । यो नै व्लगिङ्ग हो …
– ईमेलमा एउटा मेल आयो , लेखिएको थियो , तपाईको व्लग म पढ्छु , व्लग भन्या के ? किन व्लग लेख्ने ? कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ ? के कस्ता कुरामा ध्यान दिने ? क-कसले …
-ज्ञानु वस्नेत धेरै पैसा कमाउने रहर कसलाई हुँदैन ? व्यक्तिगत एवम पारिवारीक खर्च धान्न, सामाजिक गतिविधी एवम् हितका लागि जानकारी राख्नु व्यवस्थित तुल्याउनु हरेक व्यक्तिका कर्तव्य र उत्तरदायित्वहरु हुन्, …
– अष्ट्रेलियाकी ११ वर्षिय ईम्माले Video Blogging सुरु गरेको केहि महिना मात्रै भएको छ । उनले youtube video च्यानल खोलेकी छिन् । आफुलाई लागेका रमाईला र सृजनात्मक विचारलाई भिडियोमा …
– इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने तर गुगल एकाउण्टको प्रयोग नगर्ने प्रयोगकर्ता भेटाउन मुस्किल छ । विश्वमा प्रयोगको अवस्थालाई मुल्याकंन गर्दा ईन्टरनेट नै गुगल हो भन्दा फरक नपर्ला । हरेक जिज्ञासादेखी …
अहिल्य सामाजिक सञ्जाल फेसवुक चलाउनेकै जगजगी छ, ईन्टरनेट सम्वन्धी जानकार नहुनेहरुले पनी फेसवुकको प्रयोग गरिरहेका छन् । जे भएपनी जमाना फेसवुककै छ । स्कुले विद्यार्थीदेखी कपाल पाकेका वयोवृद्धहरुलेपनी फेसवुक …
– सन् २००५ मा स्थापना भएको युट्युव डटकम एलेक्सा ¥याङकिङमा उत्कृष्ठ तेश्रो स्थानमा छ । ईन्टरनेटमा भिडियो सम्वन्धी काम सजिलै गर्न सकियोस भन्ने उदेश्यले चाड् हर्रे, स्टिभ चेन,जावेद करिमले …